serial 2709 days ago
fucheketo 2709 days ago
*~Spring~* 2709 days ago
Juggy 2709 days ago
Bhaktey 2708 days ago
GoneCrazy 2708 days ago
ilam2008 2708 days ago
ThahaChaena 2708 days ago
fucheketo 2708 days ago
fucheketo 2706 days ago
Jhapali_Thito 2706 days ago
Bhaktey 2706 days ago
timi_mero_sathi 2706 days ago
sojoketo 2649 days ago
fucheketo 2649 days ago
Visitor from US is reading AT&T acquire T-mobile !!
Visitor from DE is reading What is wrong with the pic??
Visitor is reading Funny News!
[VIEWED 24566 TIMES]
Posted on 05-16-14 10:32 AM Reply [Subscribe]
Some browser issues with sajha, had to read the comments from my gmail account, thaney and bachata ..thank you for the comments.Fuel tank thanksalot for the comment (मैले एउटा लामो कमेन्ट रिप्लाइ गरेको थीएँ ,I hope you read that, प्रतिकृया मलाई एक दमै चित्त वुझ्दो लाग्यो, मैले ध्वाँसे एउटा कथाको रुपमा शुरुवात गरे ता पनि अहिले यसलाई उपन्यास वनाउन सकिने सोच लिएको छु, सामान्यतय उपन्यासहरु सम्पादन गरिनुपर्छ , जुन हाल सम्म ध्वाँसेमा गरिएको छैन। मैले सोच्ने वित्तिकै लेखेर पोष्ट गरिहाल्नाले सो गल्ती भएको हो(म गल्ती स्विकार्छु र सम्पादन गर्दा सो च्याप्टरका केहि अंश वदल्ने पनि छु),अन्य यस्तो गल्तीलाई फेरि औँल्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि आश राखेको छू।
अन्य पढिदिनुहुने ,लाइक गरिदिनुहुने सवैलाई धन्यवाद
for Dhwase part 1 please refer ..
ध्वाँसेमा राजनिती भरिएको छ- थापाकाजी
मेरा बा महेन्द्र राजाका नजिकैका मान्छेमा गनिन्थे। विरेन्द्र राजा पनि गाउँ डुल्न आएका वेला उनी साह्रै खुशी भएका थिए, साक्षात विष्णु गाउँ डुल्न आउने भए भनेर।उनको अनुहार उज्यालो थियो त्यो दिन, म उनको सवैभन्दा कुरा मिल्ने छोरो भएकोले होला मेरो नजिकै आएर भने
"वुझिस् माइला फूलवारीका राम्रा राम्रा फूल टिपेर राख,भगमान गाउँ आउँदैछन,माला वनाउनुपर्छ।"
संस्कृतमा भनिएको पनि छ नि राजा भनेका त विष्णुका अवतार रे !मैले पनि त्यतिखेर राजा सँग भेट गरेको थिएँ। त्यतिखेर म दश कक्षामा पढ्थेँ, भलिवल पनि खेल्थेँ। मेरो भलिवल खेलको प्रशंसा पनि भएको थियो। विरेन्द्र शिल्डमा मलाई काठमाण्डौ पठाइदिने कुरा समेत भएको थियो।
हाम्रो वंशावलीमा लेखे अनुसार हामी भिमसेन थापाको खलक अरे! अनि हाम्रै पुर्खा मध्ये एकले सुसारेलाई भगाएपछि हामीलाई उपत्यका निकाला गरिएको अरे!पछि राजाले पुर्वको रखवाली गरेवापत त्यो गाउँको जंगल हाम्रा जिजुवुवालाई दिएका अरे! त्यसपछि जिजुवुवाले त्यो जंगल फडानी गरेर गाउँ वसाएका ,पहाडवाट आफूलाई मन पर्ने र काम लाग्ने मान्छे राखेर !हाम्रो हजुरवुवा त्यहि भएर यो गाउँको राजा चाहिँ म हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो म सानो हुँदा । म पनि आफुलाई राजकुमार जस्तो लाग्थ्यो। राजाको फोटोमा आफ्नो टाउको हाल्दा कस्तो हुन्छ कल्पना गर्थेँ। तर त्यो श्रीपेँचमा मेरो ठूलो टाउको अट्दैन कि भन्ने मलाई डर लाग्थ्यो।
हाम्रो हजुरवुवा घोडामा चढेर गाउँ डुल्नु हुन्थ्यो अरे! हाम्रो घरमा काम गर्ने मात्रै करिव पचास मान्छे थिए अरे । अनि काठको सानो तिनो दरवार जस्तै घर! म घोडालाई सुसारेहरुले चना खाएको हेरीरहन्थे। हाम्रो घरको पछिल्तिर घोडा वान्ने तवेला पनि वनाइएको थियो। सानोमा आसपास खेल्दा हामी त्यहिँ लुक्थ्यौँ। नचिनेको मान्छेलाई घोडाले लात्तले हान्छ । त्यहि भएर साथीहरु घोडाको नजिकै जान डराउँथे। मेरो लागि सवैभन्दा प्यारो त्यो घोडाको तवेला र मेरो घर! तर त्यो पछि पन्चेको घर भनेर जलाइयो।मैले रुन्चे आँखाले त्यो घर जलेको हेरेँ।म त्यतिखेर सकृय राजनिति मै थिएँ। स्थानिय चुनावमा पनि मैले गा.वि.स अध्यक्ष जितेको थिएँ त्यो हुनाले गाउँलेको म प्रति आदर र सहानुभुति थियो भन्ने त मलाई थाहा थियो। तर शक्ती र वन्दुक को अघि सवै चुप हुन्छन्। म पनि चुप वस्नु पर्यो । हामी त्यसपछि उपत्यका छिर्यौँ। राजाले हामीलाई उपत्यका वाट निकाले,गाउँकाले हामीलाई गाउँवाट! तर पनि गाउँमा जव म फर्के , मेरो रवाफ सकिएको रहेनछ भन्ने पनि वुझेँ। संसार आखिरमा पैसै वाट चलेको त रहेछ। मैले काठमाण्डौ आएर शुरु गरेको चामलको व्यापार फस्टाएपछि मैले काठमाण्डौमा पनि घर वनाएँ ।गाउँको घरमा शूरुमा त पार्टिका झण्डा गाडेर हामीलाई आउन नदेलान नै जस्तो वनेको थियो। तर पछि उनीहरुले छोडिदिए। म गाउँ गएको वेला घरमै वस्न थालेँ। टिन नयाँ लगाएँ । काठहरुमा रंग लगाएँ। त्यो घर फेरि चिटिक्कको देखियो।
ध्वाँसेको घर भने मेरो भन्दा पाँच मिनट जति टाढा खेतवारीको विचमा थियो। उसका वुवा पहिला हाम्रै खेतमा हलीको काम गर्थे। पछि सापटी लिएर तिनी विदेश तिर लागे। रिन तिर्न पछि सम्म पनि सकेका थिएनन्। त्यसैविचमा ध्वाँसे पनि पार्टीमा लाग्यो। उसमा पनि वन्दुकको शक्ती आयो। हाम्रो रिन नतिरे पनि हुने भयो। हामीले खासै वास्ता पनि गरेनौँ। ज्यान भए पैसा त पछि पनि कमाइहालीन्छ नि जस्तो सोच आयो भनौँ दिमागमा !
युद्द विराम पछि चुनाव को गाउँ भरी तातो छाएको थियो। नयाँ पार्टीमा गाउँका धेरै मान्छे पसेको मैले पनि गाईँगुईँ सुनीनै राखेको थिएँ। उनीहरु सँग अझै हतियार छन् भन्ने हल्ला पनि गाउँभरी छ्यापछ्याप्ती थियो। त्यहि भएर पनि खुलेर राजनितिमा आउन मैले आँट भने गरिसकेको थिइन।हुन त राजनितिले मलाई के नै दिएको थियो र ! म गा.वि.स अध्यक्ष हुँदा वनाएको चोकको महेन्द्रको सालिक यहि पालाको आन्दोलनमा भत्काइदिएका थिए आन्दोलन कारीले । साह्रै सजिलो गरी फुट्यो त्यो सालिक भन्थे गाउँकाले ! मैले सुनेको नसुन्यै वनाइदिएँ। त्यतिखेर हामीले त्यो सालिकमा त्यतिवेलाको विस हजार कमाएका थियौँ रातारात गरेर वनाएको सालिकमा हामीले भित्र फलामका डण्डी कम गरेको गुनासो झन्न कसैको आएन। एक तरिकाले ठिकै पनि भयो अव सालिक ढल्यो। मेरो भ्रष्टाचारको प्रमाण पनि! आखिर महेन्द्रले मलाई अहिले विउँझिएर जागिरमा लाइदिने हैनन् क्यारे!
************ ************** ************ **************** ************* ********
साँझ झिमिक्क परिसकेको थियो। मेरो घरमा सोलार जोडेपछि लोडशेडिंगको खासै फरक पर्न छोडेको छ। आँगनमा वसेर म हुक्का वनाउँदै थिएँ।
"काका घर मै हो ?" परवाट आवाज आयो। नचिनेको आवाज ! मैले आवाज तिर आँखा दौडाएँ। करिव तिसको वलियो केटो !
"म ध्वाँसे क्या !" ध्वाँसेले आफ्नो परिचय दियो। मेरो मनमा ढ्वाँग्रो ठोक्यो। हुन त उनीहरु युद्द विराममा छन् । तर उसले मास्टरलाई रेटेरै मार्यो भन्ने गाउँमा हल्ला थियो। त्यस्ता नरपिसाचको के भर र ! फेरि उसको र मेरो कहिलेदेखि यो काकाको सम्वन्ध लाग्यो? मलाई पनि थाहा छैन यो कुरा त !
"वस न त !" मैले छेवैको खाली कुर्सी देखाएँ।
"काका सँग एउटा सल्लाह गर्नु छ !" उसले आफ्नो कपाल कन्याउँदै भन्यो।
"भन न !" मैले सुस्तरी जवाफ फर्काएँ। उ मेरो हुक्का हेरिराख्यो। त्यो हुक्का मेरो हजुरवुवाको पालाको। तल भुइँमा चाँदिको जलप लाको छ। माथी साँपको नक्सा कुँदेको छ। मेरो हजुरवुवाको शौख देखेर म दंग पर्थेँ यो हुक्का देख्दा! हामीले जल्दै गरेको घरमा धेरै मेहेनत गरेर यो जोगाएका थियौँ। हजुरवुवाको ठूलो तस्विर भने जोगाउन सकिएन। उनको आधा जिउ जलेको फोटो मेरो भित्तामा अझै छ।
"चुनाव नजिँकिँदै छ, यसपाली कतापट्टी लाग्ने विचार गर्नुभको छ ?" उसले मेरो आँखा नियाल्दै प्रश्न राख्यो।
म चुप थिएँ। खै के भनुम् ? नखाउँ त दिन भरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्थे वुढापाकाले ! उसका प्रश्नहरु मलाई पनि निल्नु न ओकल्नु भए।
"हेर्नुस काका,पन्चेहरुलाई गाउँ भित्रिन दिनु हुँदैन भनेर ठूलो कुरा भको थियो, हाम्रो पार्टी कमिटी भित्र। मैले थापा काका भनेका विकास प्रेमी मान्छे हुन् ! उनले समय अनुसार परिवर्तन हुन जानेका छन् भनेर तँपाइको कुरा गरेँ!"
उसले कुरा कता घुमाइरहेको थियो मैले वुझ्न सकिन त्यहि भएर उ वोली मात्रै रह्यो म सुनी मात्रै रहेँ।
"हामी सँग गाउँको ठूलो युवा जमात छ, तर वुढा वुढी हरुलाई अझै पुरानो धंगधंगीले छोडेको छैन , यस्तो तालले गाउँको समाजको विकास पनि हुँदैन ! कि कसो त काका !"
सावित्रीले चिया लिएर आइ । मेरो खेतमा काम गर्नेकी छोरी, मैले घरको काम गर भनेर राखेको छु । उसले सावित्रीलाई पिलिक्क हेर्दै चिया लियो।
"यी वुइनी चाहिँ को नि ?"उसका आँखा वलिहाले। मोरोलाई केटी देख्नै हुँदैन। त्यो साहिँली मगर्नी सँगको हल्ला मैले खुवै सुनेको छु। विरे की छोरी शान्ती सँग पनि यसको लसपस थियो रे ! त्यसको त दश दिन अघी विहे भयो। त्यसलाई सम्झेर यसले रातभरी जाँड खाएर हल्ला गर्यो पनि भन्थे गाउँका केटा !
"सावित्री, पर्शुरामकी छोरी, यहाँ काकीलाई भान्सामा सघाउँछे ,स्कुल पनि पढ्छे !"
"म के भन्दै थिएँ भने नी काका, तँपाइलाई नयाँ पार्टी खुवै फाप्छ , वुढापाका तँपाइले भनेको मान्छन् पनि , हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुस् ! गाउँमा वस्न सहज पनि हुन्छ तँपाइलाई ! नेतृत्व गर्न जानेको मान्छे,विकास वुझेको मान्छे!"
उसले मलाई खुल्ला प्रस्ताव राख्यो। म अकमक्क परेँ।
"के सोच्नु भको काका ?" उसले मेरो आँखा नियाल्दै प्रश्न राख्यो । " हेर्नु पार्टीमा राम्रो ठाउँ दिलाउने जिम्मा मेरो भयो, फेरि यो क्रान्तिवाट जन्मेको पार्टी हो, जहिल्यै अघि वढ्छ, कति समात्नुहुन्छ ति दंगदंग्ती गनाइसकेका पार्टीहरु , यसपाली खुलेर लाग्न पनि भ्याउनु भएको छैन पुरानो पार्टीमा! हेर्नुस् त तिनीहरुका संगठन,हामीले उहिल्यै जरा काटीसक्यौँ, को छन् तिनीहरुको प्रचार गर्दै हिँड्ने गाउँमा ? हामी सँग आउनुभयो भने जित पक्का छ अनि अहिल्यै हामी सँग आउनुभयो भने घात गरे जस्तो पनि देखिँदैन !"
म चुप नै लागि रहेँ।उसले चिया सिध्यायो। सावित्री गिलास उठाउन आई। उ झुक्दा उसको छातीलाई मज्जाले नियाल्यो ध्वाँसेले।
"ल लागेँ काका अव म ! मैले भनेको वारेमा सोच्नु ,मैले पर्सी सम्म उत्तर दिनु छ, त्यसपछि लाग्छु म पनि राजधानी तिर !" उ उठ्यो।
उ हिँडिसकेपछि, मैले धेरै वेर कुरा खेलाएँ। कुरा ठिकै लाग्यो। मेरो रवाफ गाउँमा फर्काउने यो राम्रो अवसर हो। ध्वाँसेले राजनिती जानेको रहेछ वा भनौँ ध्वाँसेमा राजनिति भरिएको रहेछ।
Posted on 05-21-14 11:33 AM [Snapshot: 422] Reply [Subscribe]
Gajjab fuchhe -
Posted on 05-21-14 11:51 AM [Snapshot: 438] Reply [Subscribe]
serial thank you,
Thanks to fuel tank,bachata ,bhakte dai and all the readers who read Dhwase till now, liked it till now, This is the end of second chapter. Third Chapter will be probably the last one, and I ll soon start working on it. मैले यो कथाको प्रत्येक अध्याय कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने र पढिदिने साझावासीलाई धन्यवाद दिएर शुरु गरेको थिएँ। तर यो साझाको कुरा कहिलेकाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ, कहिले के समस्या आउँछ ,कहिले के.. अहिले मात्र कथा देखिने समस्या आइराखेको छ। (May be because I wrote something then copied story, now only copied text is seen here)...
Bhakte dai put one interesting comment that I was writing this story onaregular basis, दाइ मलाई यो कथाको भित्र आफु नै छु कि जस्तो लाग्न थालेको छ ,विस्तारै विस्तारै! may be that is the reason why i m writing this story regularly, if my time and my internet permits I ll keep on writing it regularly . I have few more charecters in mind to move the story forward.
Btw Anyone who knowsagood publisher,wants to see dhwase published and can help me ? if yes please message me .
thanks to sajha again for providing me platform,to try something new,
Posted on 05-21-14 12:06 PM [Snapshot: 447] Reply [Subscribe]
Wonderful writing, very captivating. Movie hereko jasto.
Posted on 05-21-14 12:36 PM [Snapshot: 451] Reply [Subscribe]
Fuche, You made story your own by the end. I would love if someone made this into movie someday. And please send meamessage if you ever publishabook. I will be first one to buy it. :)
Posted on 05-21-14 1:10 PM [Snapshot: 487] Reply [Subscribe]
I will buy Dwaase novel if it ever gets published.
Will comment after reading the latest part.
Last edited: 21-May-14 01:11 PM
Posted on 05-21-14 3:52 PM [Snapshot: 532] Reply [Subscribe]
I do not read much novel. But this could be one of the best novel/movie of all time. You just need right director and right person to narrate it. Well if this movie comes, I promise I will buy the ticket to watch it. Even if u publish the book, I will buy it. :)
Posted on 05-21-14 8:53 PM [Snapshot: 575] Reply [Subscribe]
Fuchheketo dai, chupchaap nai padhirakhya thiye, silent reader bhanchan kyare aangrazi ma, aja chai naboli basnai sakina..aauta filim po banaunu parcha kya ho dai....mangalbazar tira chiya khadai yo bisaya ma alik lamai chalfaal jaroorie dekhe..gajaab fimim bancha dai Dhwase..lau na kehi garum!!!!
Posted on 05-22-14 5:56 AM [Snapshot: 625] Reply [Subscribe]
तिम्रो अर्को किताब को बिमोचन मा उपस्थिति जनाउञ्छु भनेको थिएँ हुन सकेन ...... अब येही किताबको बिमोचन मा चै आउनु पर्ला जस्तो लग्यो मलाई...
अघि देखि पढी बसेको थिएँ केहि नबोली ...... शब्द भेटे पो बोल्नु .... अहा कस्तो लेख्न जान्ने भनेर कति भन्नु तिमीलाई .... यो थानेलाइ त प्रसंसा नै गर्न आउदैन भन्लाउ फेरी..... तर मित्र तिम्रो लेख ले साझाको बगैंचा मग्मगायेकै छ ..... तिम्रो सृजनशीलताको बास्नाको रसास्वादन गर्न पाउनु भाग्य नै हो मेरो ....
तिम्रो यो ध्वाँसे मैले सुरुमा जस्तो सोचेको थिएँ आखिर तेस्तै निस्कियो ..... मायालाग्दो ..... एउटा गीतको सम्झना गराउँछ उसको स्थितिले सधैं ......प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाइ कहाँ कहाँ पुर्याउँछ ....
बिचरो रुमल्लिरहेछ अमिलो अतित र पतित समयको जालमा ...... अन्तिम खण्ड पढ्ने रहर बाँकी ....
Posted on 05-22-14 10:04 AM [Snapshot: 673] Reply [Subscribe]
Thank you Spring,Bhakte dai,Gone crazy and thaney
Ilam 2008- sorry couldnt make it today, but lets arrange mangalbazaar meeting this weekend ;)
and thanks to all the readers who read Dhwase till now , liked it till now.
Posted on 05-22-14 10:05 AM [Snapshot: 674] Reply [Subscribe]
कुखुरापालन- अष्ट धिमाल
चुनाव जितुन्जेल हाम्रो पार्टीले जितेको जस्तो लागेको थियो। हामी व्यारेकमै भए पनि ठूलो खुशियाली मनाएका थियौँ।तर युद्द सोझो तालले जितिन्छ, युद्दले उन्माद ल्याए पनि मान्छे वांगिदैनन्, चुनाव त नागवेली चाल चल्छ जस्तो सुकै प्रष्टवक्तालाई पनि कुरा चवाउने वनाउँछ,आनाकानीको भाषा सिकाउँछ।यो चुनाव पनि पृथक भएन। उहि पुरानो चुनाव ,मात्र नयाँ खोल ओढेकाले जिते।
कहिलेकाहिँ खडेरी लागेको जीवनमा पानीका थोपाहरु हराउँछन् भुइँ रसाउन नपाइ। क्रान्ती मेरो लागि त्यहि पानीको थोपा जस्तै। जीवनमा आउन नपाइ, जीवन रसाउन नपाइ कहाँ हरायो कहाँ त्यो पानीको थोपो।कहिले मैले चिरा परेका भुईँमा आँखा लगाएँ,कहिले वादलै नभएको आँकाशमा तर मेरो आँखालाई माया गरेर न वादल देखियो आकाशमा न भुईँका चिरा मेटिए।
आर्मीले केहि नगरी खुव कुटपिट गर्यो मलाई, मरणासन्न पारेर मर्यो भनेर छोडेको हो तिनीहरुले। मेरो भाग्य वलियो म वाँचे।मेरी वहिनी जुन केटासँग भागेकी थिई त्यो त्यतिखेर युद्द मा लाग्यो अरे तिनीहरुको वारेमा वुझ्न आएका थिए।मलाई थाहा थिएन, मलाई थाहा छैन नै भने। उनीहरुले पत्याएनन्। मेरी आमा कराइरहिन,उनीहरु लात्तले वुट वजारिरहे।थिलथिलो भएको जिउ सुम्सुम्याउन भोलिपल्ट ध्वाँसे मेरो घरमा आइपुग्यो। ध्वाँसे र म स्कुलमा सँगै थियौँ। उ पनि युद्दमा लागेको मैले थाहा पाइसकेको थिएँ।
"अव के हेरेर वस्छस् ? आज हिँडिनस् भने भोली पनि आउँछन् भकुर्छन् ! जव सम्म हामी वरावर शक्तीको हुन्नौ उनीहरु दबाइरन्छन् हामलाई !" उसले छेउमा राखेको माटोको गाग्रीको पानी सारेर खाँदै भन्यो।म धेरै वेर मौन नै वसिरहेँ। ध्वाँसेको कुरा सामान्यतय स्कुलमा पनि नाइँ भन्दिनथेँ। उ स्कुलमा पनि हिरो जस्तो थियो।मैले आफ्नो शरिर भरीका निलडाम हेरेँ, त्यो आर्मीको सम्झना आयो अनि किन किन जोश वढेर आयो।त्यहि रात म ध्वाँसे सँग हिँडे आफ्ना दुई जोर लुगा वोकेर।
उनीहरु सँग डक्टर पनि रहेछन्। मलाई शुरुमा उपचार गरेर राखियो। अनि त्यसपछि म सैन्य दस्तामा समावेश भएँ। हाम्रा सुराकीहरु आर्मी भित्र पनि थिए।मलाई कुट्ने मेजरको आमा मरेर किरियामा उसको घर रामेछाप जान आटेको हामीले थाहा पायौँ।उ वसमा घर जाँदै थियो। हामीले गाडी वाटैमा रोकेर उसलाई लिएर आयौँ, हाम्रा साथीहरुको सहायतामा । उसलाई जंगलमै सिध्याएर गाडीसकेपछि म धेरै वेर रोएँ। मान्छे सँग जत्ति रिस उठे पनि उसलाई सिध्याइसकेपछि भने त्यो लाशको माया लाग्दो रहेछ।त्यो मेजरको लाश उठेर मलाई वुट वजार्ला जस्तो थिएन। त्यो त ढलेको थियो, निन्द्रा मा भए जस्तो ! रगतमा लतपतिएको, माया लाग्दो!!
हामी शान्ती प्रकृयामा आएपछि हामीलाई व्यारेकमा राखियो। सुत्ली वम वनाउने वेलामा मेरो एउटा हात उडेको थियो। म छनौटमा परिन। मलाई केहि पैसा थमाएर गाउँ पठाए।त्यसपछि के गर्ने म अलमलिएको थिएँ।कसैले मलाई सल्लाह दियो "अव कुखुरापालन गर " भनेर ! कुखुरापालन मा फाइदा त थियो तर वर्डफ्लुको रिस्क पनि ! जे होस् मैले गाउँमै एउटा पोल्ट्री खोल्ने निधो गरेँ।आएको पैसा अपुग थियो, जग्गा थिएन धितो राख्नलाई।मैले ध्वाँसेलाई सम्झेँ । वुध दाई मन्त्री भएको छ, ध्वाँसे काठमाण्डौ मैँ छ पक्कै केहि सहायता हुन सक्छ।
*************** *************** *********** ***************** *******************
"कति नम्वर चेन्ज गर्छस् हौ, पत्ता लाउन पनि गाह्रो !" मैले उसलाई भेट्टाउने वित्तिकै गुनासो पोखेँ।
"मान्छेको जिन्दगि चेन्ज भइसक्यो तँ नम्वरको कुरा गर्छस् !" उसले चुरोट उडायो। ध्वाँसे पहिला त्यति साह्रो चुरोट पिउँदैन थियो। तर आजकल धेरै नै पिउन थालेको रहेछन। हुन त उसलाई अलि वढी नै टेन्सन होला। पार्टीको,तरुनीको अनि अरु धेरै !
"के चेन्ज भो र ?"
"भो छोड्दे यी कुरा ,अनि किन आइस् त यो धुलो खानलाई काठमाण्डौ !"
"केहि काम शुरु गरौँ भन्ने विचारमा थिएँ ,पैसै पुगेन !" मैले चियाको टेवलको रंग कोट्याउँदै जवाफ दिएँ।त्यो टेवल शुरुमा निलो हुनुपर्छ । तर अहिले काठको रंग देखिन थालेको छ भित्रको! निलो त मात्र ठाउँ ठाउँमा थियो।कुनै चुहिने छाना भएको गरिवको धुरी जस्तो देखिएको थियो।
"साँची पैसा पुगेन भन्दा पो सम्झेँ ,पार्टीले तिमीहरुलाई पनि चिलेछ नि हैन ? कति वुझाइस पाएको पैसा मध्ये ?"
"भनेको भन्दा आधा मात्रै दिए नी, पार्टी शसक्तिकरणलाई चाहिन्छ भनेर !" मेरो अनुहार अचानक कालो भयो।त्यो पुरा दिएको भए त पोल्ट्रि फर्मलाई रिन नै त खोज्नु पर्दैन थियो।
"क्रान्तीकारी पार्टीभित्र सामन्ती जन्मे वुझिस् ?" उसले चिया सुरुप्प पार्दै भन्यो। आजकल उ ठूल्ठुला कुरा गर्छ ।ठूला मान्छेको संगतले होला।"अनि के मसँग पैसा खोजेको तैँले ?" उसले मेरो अनुहार हेरेर हाँस्दै भन्यो।
"हैन वुधे दाइ सँग भेट्टाइदिन्छस् कि भन्ने सोचेको ! उनकै पार्टीको मान्छे सहयोग गर्लान नि !"
ध्वाँसे एक छिन चुप भयो । वाहिर हेर्यो। मैले उसले वाहिर के हेर्दैछ भनेर हेरेँ। कलेजका ठिटाठिटी इत्तरिरहेका। करिव अठार पुगेको केटो चुरोट उडाइरहेको ,अनि शायद सत्र पुगेकी केटीलाई चुरोट फुक्न सिकाउँदै । गएर गाली गरुम् कि जस्तो लाग्यो। हाम्रै गाउँका भए त दुई झापड नै लगाइदिन्थेँ ।तर शहर पर्यो ।आफ्नो रिस दवाएँ। आफुलाई आफ्नै टेन्सन छ।
"राजनिति, नेता तैँले वाहिरवाट जस्तो देख्छस् त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र ?" उसले अलि घुमाउरो भाषामा मलाई नाइ भनेको हो त्यो त !
"एक चोटी भेटाउन पनि सक्दैनस् त ?"
"सक्न त सक्छु तर ...."
"तर के ? तेरो यति सानो देखिको साथिलाई त्यति पनि गर्दिन्नस् ?" मलाई झोक चलेर आयो। एउटै पार्टीको भनेर उसले काम नगरोस् तर उसको त म सानै देखिको साथि। किन आनाकानी? मलाई पनि थाहा छ, मैले खोजे जति पैसा उसँग छैन। न मैले उ वाट खोजेको हो। त्यहि भएर त म वुधे दाइलाई भेट्न खोज्दैछु।
"मैले तँलाई लिएर गएँ भने उनले काम नगर्दिन सक्छन्, उनको र मेरो अहिले राम्रो छैन। अरु नै कोही मान्छे पक्डी न !"
म चुप भएँ। उसले वहाना वनाएको वा साँचै भनेको छुट्याउन गाह्रो भयो।
"के भयो र तेरो र वुध दाइको विचमा ?"
"पार्टी टुक्रिदैछ, म शायद अर्को तिर जान्छु होला, वहाँहरुको खेमा क्रान्तिकारी रहेन, देश वेच्ने सम्झौता गरे उनीहरुले, ढोंग भयो संविधानको नाममा धेरै !"
उसले चिया टुंगियो। म उसको र बुधदाइको सम्वन्ध विग्रेकोमा दुखी हौँ की। आफ्नो काम नबनेकोमा । पक्कै पनि मेरो काम मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ! उ सँग केहि त उपाय होला, यति जानेको मान्छे!
"केहि उपाय छ त मन्त्री सँग भेट्ने ?"
"तँ यसो गर, थापाकाजी चिन्छस्? हाम्रो गाउँको ?"
"को त्यो पन्चे ?" मैले अचम्म मानेँ
"त्यो पन्चे कहाँ रह्यो र हामीले चुनावको बेला पार्टी प्रवेश गराएको विर्सिस ?"
"अँ ,चिन्छु !"
"कोटेश्वरमा बस्छ गएर भेट , ला उसको नम्वर !" उसले मोबायलवाट एउटा कागजमा नम्वर टिपिदियो। मैले त्यो कागजलाई रुमाल जस्तो जतन गरेर पट्याएँ ।अनि गोजीमा राखेँ।
Posted on 05-22-14 10:07 AM [Snapshot: 677] Reply [Subscribe]
ध्वाँसे दाइ सँग मेरी सरिताको कुरा – कान्छो
"तँ मुला, मेरो अलि बोली विक्न छोड्यो भन्ने वित्तिकै फोनै नउठाउने !" ध्वाँसे दाइको रिस गज्जपको छ। माया गरेको वेला ज्यान छोडेर माया गर्छन् ,रिसाएको वेला हात छोडेर रिसाइदिन्छन् । झापड खाइएला भन्ने डर थियो भेट हुँदा झन्न फोनवाटै आवाज आएकोले झापड नै चाहिँ खाइएन।
"हैन के दाइ , नम्वर चेन्ज गरिराख्नु हुन्छ ,कुन नम्वर तँपाइको म कसरी पत्ता लाउनु भन्नु त ?" मैले मेरो स्पष्टिकरण दिएँ।
"मुला खुरुक्क न वेलुका भेट , त्यहाँ पाटनमा ! सँधैको ठाउँमा !"
"भरे त अलिकति काम छ दाइ !" मैले सुस्तरी जवाफ दिएँ। मलाई थाहा छ ध्वाँसे दाइ लाई नाइ मन पर्दैन । तर भरे त सरितासँग भेट्ने कुरा भएको छ।सरिता पनि त रिसाउन सक्छे।
"तँ त्यहिँ शंखमुलमा वस्ने हैन, काटेर पुलमुनी फाल्दिन्छु तँलाई आइनस् भने !" ध्वाँसे दाइले मैले केहि वोल्न नपाइ फोन राखे। कस्तो खरो रिस, कस्तो रुखो वोली,म अलमल्लमा परेँ। ध्वाँसे दाइ त ओखर हो, साह्रो ,फोर्नलाई गाह्रो तर नजिकिए पछि भने असाध्यै मिठो।ध्वाँसे दाइ भन्दा बरु सरितालाई नै फकाउन सजिलो होला जस्तो लाग्यो। मोबायलवाट एसएमएस पठाएँ
"आज आउन भ्याइन, काम पर्यो !"
उताबाट रिप्लाइ आयो "जे सुकै गर, पैसा जोडेर लिन्छु महिनाको लास्टमा !"
************** ************** ***************** *************** *********** *****
पाटनका गल्लीहरुसँग हाम्रो अनौठो सम्वन्ध छ। त्यहाँको त्यो देवीको मन्दिर म कहिल्यै देव्रे कट्दिन। एकदिन झुक्किएर देव्रे कटेको त्यहि दिन पुलिसले लखेट्यो। हामी पर्चा सर्चा सवै छोडेर भाग्यौँ। पाटन क्याम्पसको वाल नाघेर भागेपछि मात्र वल्ल अलि सास आयो। ध्वाँसे दाइलाई त्यति खेर मैले भनेको थिएँ
"दाइ आज त्यो देवीको मन्दिर देव्रे कटिएछ , त्यहि भएर अनिष्ट आको !"
ध्वाँसे दाइले आफ्नै भाषामा जवाफ फर्काए
"नापो तेरो देवीको मन्दिरले, भोली फनफनी तिन फन्को उल्टो घुम्दिन्छु के हुन्छ हेरौँला।"
म फेरि वोल्नु भन्दा चुप नै वसेँ।
***************** ****************** ********************* **********************
"के हो खुब बिजी छस् त आजकल !" ध्वाँसे दाइको रिस मरेको थिएन भेट्दा !
"त्यस्तो हैन दाइ !"
"के हो त ? मुला कि केटीको चक्करमा परिस् ?"
म केहि बोलिन। यो चक्कर त हैन पक्कै । यो त व्यापार हो।
"गाह्रो हुन्छ है परेपछि छुटाउन केटा ,होश गर , लडेकै मान्छेले वोलेको हो !" मलाई थाहा छ ध्वाँसे दाइ मायामा लडेका मान्छे हुन्।
"साँची अहिले याद आउँछ कि आउँदैन दाइ ?"
"कस्को ? शान्तीको ! भेट भको थियो एक महिना जति अघि !"
"अनि गफ पनि भयो ?"
"अरु त के गर्न सकिन्छ र , अव दुई वर्ष पछि भेट हुँदा भान्जा भान्जीलाई आइसक्रिम खुवाउनुपर्छ !" ध्वाँसे दाइले नमिठो गरेर घुट्क्याए रक्सीको सुर्को।
"कस्तो कडा !"
उनले साहुनी तिर हेरेर भने। "आगो वल्यो भित्र "
"मुटु जलेको होला भाइ, रक्सीले हैन होला !" साहुनि दिदी खितित्त हाँसिन्।दाइले जवाफ फर्काएनन्।
*************** ****************** ******************* ************** ***********
"अनि को हो त केटी ?"
"छे दाइ सरिता भन्ने !"
"काँ कि ?"
"हैन कसरी ताकिस् हौ सिन्धुपाल्चोक की ,पुर्वको मान्छेले !" ध्वाँसे दाइ अचम्ममा परेँ।
"त्यस्तो केहि हैन दाइ !"
"कस्तो हो त?"
"पैसा तिरेर हो दाइ !" मैले सुस्तरी भनेँ।
"थुक्क मोरा, के के न होला भनेको,गन्हाउने बोको सँग केहि लाग्छ ? सारा नशा गायव ! म त अर्को पनि म जस्तै देवदास हुने भयो भनेर डर पनि लागेको थियो!" ध्वाँसे दाइले फेरि एक घुट्को लगाए
"ठिकै रैछ दिदी, मुटु नै जलेको रहेछ, यसपाली अघिको जति पोलेन !" दाइ साहुनी तिर हेरेर खिस्स हाँसे।अनि म तिर हेरेर भने
"तँलाई थाहा छ ,यी दिदीलाइ देख्ने वित्तिकै मलाई कसैको सम्झना आउँछ!"
"मलाई थाहा छ दाइ !" मैले त्यो कथा फेरि सुन्न चाहिन। कति सुन्नु एउटै कथा ,भट्टिमा आएपिछे।
"त्यसो भए त ठिकै छ ! तर कान्छा आखिर उसलाई पनि रमाइलो तँलाई पनि रमाइलो ! के खान पैसा तिर्छस् त ?"
"हेर्दा नै तिरुम् तिरुम् लाग्छ दाइ !"
"वाहिरको प्याकिंग न हो भाइ फरक , सामान त उहि खासाको ! जतन गरे चल्ने ,नभए विग्रीजाने !" यसपाली ध्वाँसेदाइ जोडले हाँसे। मानौ आइमाइहरुलाई होच्याएर उनी मज्जा लिइराखेका छन्।
"हैन दाइ ,सरिता अरु भन्दा फरक छे !" मैले सुस्तरी जवाफ फर्काएँ।
"के मानेमा ?"
"खै एक दम गम्भिर लाग्छे मलाई !"
"दिदी एउटा चुरोट दिनु त !" "नचाहिने के को गम्भिर हो यो फेरि ? "
"खोइ त्यो चाहिँ थाहा छैन दाइ !"
"एउटा कुरा सोधौँ ?" ध्वाँसे दाइ मेरो नजिकै आए।
"सोध्नु न !"
"तैँले साह्रै गफ लगाइस् , म पनि हेर्नु पर्यो कस्ती रैछे सरिता , म गएँ भने तँ रिसाउन त रिसाउँदिनस् नी !"
यसपाली भने मलाई थोरै विझ्यो। मलाई थाहा छ ,यो माया हैन, तै पनि पिडा दियो यसले।झलक्क सरितालाई सम्झेँ । हुन त म नगएको दिन पनि उ एक्लै त वस्दिन।ध्वाँसे दाइ जाँदा के नै फरक पर्छ र ?
"भो त रिसाइस् जस्तो छ ! तेरो गुडिया सँगै तैँ खेल, मलाइ चाहीँदैन पैसा पर्ने खेलौना !"
"हैन दाइ नम्वर खोज्दैछु!" मैले उसको नम्वर हेर्दै दाइलाई जवाफ फर्काएँ।
Posted on 05-22-14 10:46 AM [Snapshot: 690] Reply [Subscribe]
Oops I missed juggy, sorry nearly forgot my first novel buyer ;)thanksalot ,if I ever publishanovel ,for sure will text you.
Posted on 05-23-14 1:45 PM [Snapshot: 786] Reply [Subscribe]
Thanks to all the readers who read Dhwase and liked it till now, Next Part is the last one of Dhwase. I am ending this story(Novel??) ..special thanks to Fuel tank ..who corrected me in some portions(I ll take your suggestions if i ever publish this )
some regular readers of Dhwase.. bhaktedai, thaney,serial, bachata,ramronepal,akinchan and Few more sajha friends .who are silent readers ..I know you are reading silently my stories and smiling....
This month was kinda holiday month for me, I enjoyed italot with Dhwase(Did not know that one month will create (Dhwase )..But when I started writing ..It turned out to beajoyful ride.
There are few charecters which I took from my real life,I would also like to thank them..
and one again to sir Nayan Raj Pandey ..whose लु brought the idea to make Dhwase..
Posted on 05-23-14 1:47 PM [Snapshot: 787] Reply [Subscribe]
कान्छोको ध्वाँसेदाइ सँगको एक रात- सरिता
म आफ्नो कथा एउटा प्रश्नवाट शुरु गर्नेछु , के हो जीवन आखिर ? नसोचेको,नरोजेको अरु कसैले नै लेखिदिएको भोग्नुपर्ने। अरुको लागि नाटक गर्नुपर्ने, आफ्नो लागि त को नै वाच्छ र ? वुढी ,घर ,समाज भन्दा भन्दै आफुले वाँच्न विर्सिन्छ मान्छे।
मेरो वुवा दांगमा आर्मीक्याम्पमा भान्छेको काम गर्नुहुन्थ्यो।वुवाको पर्ने दाइले जागिर लगाइदिएको रे ! त्यत्तिखेर "खेति गरेर पैसा कमिदैन, जा जागिर खान,पेन्सन पाउने जागिर ! मैले मान्छे चिनेको छु, मात्र तैँले कुद्न सक्नुपर्छ।" भनेर भने रे। ति दाइले त्यसपछि मेरो वुवा एक महिना विहान चार बजेदेखि कुदेको कुदै ।छेवैमा स्कुलको चउर थियो। त्यहि चउरमा दौडेको दौड्यै।जागिर पाएरै छोड्नुभयो मेरो वुवाले!
मेरी आमा भने विना वाउ आमाकी तिन जना दाजुकी एक्ली बहिनी । जागिरे केटा विहा गर्न आयो भनेर विहा गर्दिए। बिहा गरेर बा जागिर खान गए,तिन महिनामा छुट्टी पाएर घर आए। त्यो छुट्टीको नौ महिनामा म जन्मेँ।
यतिसम्म कथा ठिकै छ।तर समय फेरियो गाउँमा । युद्द शुरु भयो नेपाली नेपाली विच। खै कस कसले अधिकार पाएनन् रे। गाउँका ठूलावडा सवै सामन्ति भए अरे। हामी त आर्मीसँग जोडीएका मान्छे,हामीले जोगिएर हिँड्नु पर्यो।बा एक दिन लुकीछिपी साँझमा घर आउनु भयो। मेरी वहिनी त्यतिखेर आमाको कोखमै थिई।तर सुराकीले कता कताबाट पत्ता लगाए। मेरो बुवालाई घसार्दै लगे घरवाट अलि पर वाँसघारी छ, त्यहाँ सम्म ।हामी कराइरह्यौँ। आमा एक छिनमा वेहोश हुनुभयो। तर बुवालाई चिरेर नुन चुक लगाएको सम्म मैले मेरै आँखाले देखेँ।खोइ कुन रिसमा त्यत्रो सजाय दिए मेरो वुवालाई। मेरो वुवा त आर्मीहरुलाई पनि भात पकाएर खुवाउने मान्छे। वुवा भन्नु पनि हुन्थ्यो,वहाँ लडाइँमा जानु पर्दैन भनेर।तर ति मान्छेलाई त्यो वुझाउने कोहि भएन। त्यो दिन पिडाले कराएको वुवाको आवाज मेरो कानमा अझै आइरहन्छ।वुवा विस्तारै कराउन छोड्नुभयो।अनि स्थिर हुनुभयो। तर उनीहरुले लाश पनि त्यहाँ छोडेनन्, लिएर गए। म पनि त्यसपछी वेहोश भएँ,मैले जीवनमा त्यस्तो कहिल्यै देखेको थिइन। म भगवान सँग प्रार्थना गर्छु शत्रुले पनि त्यो देख्नु नपरोस्। भोलीपल्ट विहानै मैले आमालाई भनेँ
"जौँ यहाँ नबसौँ! काठमाण्डु जौँ !"
हाम्रो घर कव्जा गरिने निश्चित प्राय थियो । त्यहि भएर पनि म त्यहाँ वसिरहन डराएकी थिएँ।तर कोहि नभएको शहरमा वाँचिन गाह्रो हुन्छ।शुरुमा मैले एउटा होटलमा काम पाएकी थिएँ,भाँडा माझ्ने चिया लिएर जाने। तर पैसा साह्रै कम हुन्थ्यो।आमालाई वेथाले चेप्दै थियो। आमाले काम गर्ने ठाउँवाट काम गर्न छोड्नुभयो। पुरै जिम्मा मेरो काँधमा आयो।मैले त्यो होटलको काम छोडेर रेष्टुरेन्टको काम शुरु गरेँ।थोरै टिप आउँथ्यो, थोरै तलव काठमाण्डौमा वाँच्न गाह्रो थियो।एक दिन एउटा अधवैँशे मान्छेले रक्सी खाएको सुरमा भन्यो।
"जान्छेस् ? मेरो घरमा वुढी छैन आज !"
मलाई त्यो दिन कतावाट आँट आयो थाहा छैन। मैले उसलाई पुलुक्क हेर्दै भनेँ "रातभरी वस्दिन ,आधा घण्टामात्र वस्छु। पाँच सय लिन्छु !"
लोग्नेमान्छे सुँगुर हुन्। फरक यति मात्र हो, सुत्न उनीहरुलाई साथी चाहिन्छ। मैले त्यसवाट गुमाउनु केहि थिएन। त्यो रातवाट मेरो कमाइ वढ्यो। परिवार राम्ररी चल्न थाल्यो। अहिले त वहिनी पनि दुई वर्षकी भैसकी। म आमालाई नाइट ड्युटी छ भन्छु,अर्को कोठा लिएकी छु जहाँ मेरो नाइट ड्युटी हुन्छ।विस्तारै विस्तारै समय वितेको छ। आजकल सपनामा पनि गाउँ देख्न छोडेकी छु। हुन त चौध वर्षको हुँदा आकी म अहिले छव्वीस भइसकेँ।
************* ***************** *************** ************** ******************
कान्छो अचम्मको पुरुष थियो।अरु आउँथे, काम भ्याउँथे जान्थे। उ आउँथ्यो एक छिन गफ गर्थ्यो। आफ्नो घर परिवारको बारेमा। उसको विहे भएको थिएन। लँडाइबाट भख्खर छुट्कारा पाएको थियो।शहरमा आफ्ना नेताको पछि पछि लाग्थ्यो।कहिलेकाहिँ राजनितिको गफ पनि गर्थ्यो।म धेरै जसो वुझ्दिनथेँ। शक्ती सन्तुलन, नयाँ सम्विधान खोइ के के ,के के । त्यो मलाई मन पर्दैन थियो।म त लँडाइले सवै गुमाएकी मान्छे। अरु दिन म गफ सुनिदिन्थे एक छिन पछि मात्र उ मेरो नजिक आउँथ्यो। मेरो शरिरले अनौठो तृप्तता पाउँथ्यो कान्छो सँग । शायद वुढासँग सुत्दा त्यस्तै तातो हुन्छ होला।राजनितिको गफ सुनेको दिन भने म उसलाई गफ सकिन दिन्न थेँ ,उ पनि मेरा खुल्दै गएका कपडाको विचमा राजनिति विर्सिन्थ्यो। जव उ थकित भएर पल्टिरहेको हुन्थ्यो। म भन्थेँ
"देखिस् राजनिति भन्दा आइमाइको शक्ती वढी हुन्छ !"
उ खिस्स हाँस्थ्यो। मलाई आफूले जिते जस्तो लाग्थ्यो, उसको मौनता देखेर।
*************** ******************* *************** ************* ********** ****
त्यो दिन कान्छोले अनौठो प्रस्ताव राख्यो। उसको कोहि दाइ मेरोमा आउने रे!
"तँ अव मलाई ग्राहक पनि खोज्दिन थालिस् ?" मैले फोनमैँ सोधेँ।
"हैन तेरो कुरा भको थियो,तँलाई हेर्ने अरे!"
"मेरो बिहे गर्दिन आँटिस् कि के हो ?" मैले उसलाई जिस्क्याएँ।
"ह्या, तेरो आज राती कोहि आउने छ कि छैन भन न !" उ पहिलो चोटी झर्कियो।
"पैसा म दिउँला पछि,नमाग्नु नी !"
मैले बुझेँ यो कुनै पाखण्डी नेता हो। गरिवी निवारण भन्छन्, आइमाइको सम्मान र समान अधीकार अनि अरु पनि के के जाती । उसलाई पनि रातमा आइमाइ नै चाहिएको छ, सँगै सुत्ने खेलौना । सुँगुरहरु !!!!
***************** ******************** ****************** *************** *******
त्यो साँझ , नौ बजे वत्ति आउने थियो। मेरो कोठा त्यसमाथी अँध्यारो गल्लीमा छ।ति माथि वाहिर कुकुर भुक्दै थिए।मेरो कोठामा ढक ढक आवाज आयो। मैले थोरै मेक अप गरेकी थिए। रातो लिपस्टिक,अनि थोरै सेन्ट,जिनिसको हाफ पाइन्ट,अस्ति भख्खर किनेको ,अनि अलि लुज लुज टिशर्ट ! केटाहरुको शुरुमा आँखा नै त्यहिँ जान्छ। हाम्रो त त्यो ट्रेलर हो ।अनुहार त त्यसपछि मात्र हेर्छन् लोग्नेमान्छे।मैले थोरै आफुलाई मिलाएर ढोका खोलेँ । कान्छो उसको दाजु लिएर आएको थियो।उसको दाजु भित्र छिर्यो। कान्छोले वाहिर वाटै "जान्छु !"भन्यो। म उ तल पुगेर गेट नलगाउन्जेलसम्म हेरिरहेँ। उ पनि अरु पुरुष जस्तै निक्लियो। मलाई वेश्या नै सोच्यो। हुन पनि हो, म वेश्या नै हुँ।म कोठामा फर्केँ।उसको दाजु छेवैको कुर्सीमा वसेको थियो।चुपचाप।दुइ घुँडा खुम्च्याएर हात कुर्सीका हात राख्ने ठाउँमा राखेर।
मैले पहिला उसलाई नियाँले। कालो रंगको टिशर्टको भित्र कोहि मान्छेको फोटो थियो,मैले चिन्न सकिन त्यो टिशर्टमा भएको मान्छे अनि जिन्स अलि अलि खुइलिएको, आजकल त्यस्तै चलेको छ। उसले दाजु भनेको सुन्दा अलि वुढो मान्छे जस्तो लागेको थियो। तर यो मान्छे त कान्छो भन्दा त्यति वुढो पनि थिएन।
"म चुपचाप बसेको पनि पैसा लिन्छु !" धेरैवेर चुपचाप वसेको देखेपछि मलाइ दिक्क लागेर मैले नै कुरा शुरु गरेँ।
उ खिस्स हाँस्यो।
"कान्छो तिम्रो खुव कुरा गर्छ, त्यहि भएर हेर्न आको !" धेरै पछि कसैले मलाइ तिमी भनेर वोलायो। आजकल त कसैले तिमी भन्यो भने मसँग कुरा गरेको हो कि होइन त्यो पनि झुक्किन्छु।
"हेर्न मात्रै ?"
"म पैसा तिरेर यस्तो काम गर्दिन, रमाइलो हुन्न ! रमाइलो त तव हुन्छ जव दुवैलाई रमाइलो हुन्छ !"
म उसलाई हेरिरहेँ। यो मेरो अपमान हो वा सम्मान हो?उसको पैसा कान्छोले तिर्नेवाला थियो। तर मेरो शरिरले उसलाई तान्न सकेन। यो अपमान नै हो !
"मैले यहाँ चुरोट पिउँदा हुन्छ ?" दुइ चोटी आफ्नो हात जिन्सको गोजीमा लाँदै फर्काउँदै गरिसकेपछि उसले मलाई प्रश्न राख्यो।
"म झ्याल खोलेर खान्छु !" उ झ्यालको नजिकै गयो।
"त्यो झ्याल नखोल्नुस्,पछाडी फोहोर फाल्ने ठाउँ छ !केहि हुन्न मलाई , म पनि पिउँछु कहिले काहिँ !"
"एउटा प्रश्न सोधौँ तिमीलाई ?" उसले चुरोट अघि वढायो।
"सोध्नुस् न !" मैले पनि उसको हातवाट चुरोट लिएँ।
"तिमी किन यस्तो काम गर्छ्यौ ?"
"रहरले त पक्कै हैन, मलाई तँपाइको नाम पनि थाहा छैन, हुन त हामीलाई नाम चाहिँदा पनि चाहिँदैन !"
"मेरो नाम तेजेन्द्र हो, तर सवै मलाई ध्वाँसे भन्छन् !" हो कान्छो फोनमा ध्वाँसे दाइ भन्दै थियो।अहिले मलाई याद आयो।
"तँपाइ पार्टीमा किन लाग्नु भयो ?" मैले प्रतिप्रश्न गरेँ।उसको उत्तरले मैले उसलाइ उत्तर दिने नदिने निर्क्यौल गर्न चाहँदै थिएँ म!
"म पनि रहरले थिएन!"
म हाँसे । उ आफ्नो पार्टी प्रवेश र मेरो यो कामलाई एउटै तराजुमा राख्दै छ।
"मेरो वुवाले चन्दा दिन सक्नु भएन। चन्दाको सट्टा एउटा मान्छे लगे !" उसले चुरोट खाएर सजिलै आफ्नो व्यथा पोखिदियो।अचम्मको मान्छे। उसको र मेरो भेट भएको मुश्किलले आधा घण्टा भयो होला। उसको जीवनको यति ठूलो रहस्य मलाइ देखाउन के नै जरुरी थियो र !
"पछि भित्रै रमाइलो लाग्यो !"
"मेरो वुवा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो !" उसले मलाई पनि आफ्नो कथा सुनाउन वाध्य वनायो।उसले पुलुक्क म तिर हेर्यो।शायद आर्मी सुनेर डर लाग्यो होला। मलाइ पनि पहिले यिनीहरुको नाम सुन्दै डर लाग्यो। शहर आएपछि मात्र थाहा पाएँ मैले धेरै मान्छेको भिँड जम्मा भए पछि त सवै किसिमका मान्छे नै जम्मा हुन्छन् नी आखिर । मान्छे त स्वभावैले एक भन्दा अर्को फरक हुन्छ।
"घर आएको वेला, तँपाइ तिरैकाले मारे ! ठूलो पिडा दिएर मारे ! म कान्छोलाई पनि कहिलेकाहिँ रिसाउँदा हत्यारा भन्छु !"
उसको अनुहार अचानक कालो भयो।उ चुपचाप सुनीरहेकै थियो।उसले त्यो हत्या युद्दको अंश थियो भनेन। धेरै जसोले त्यहि भन्छन्। वित्नेलाई थाहा हुन्छ, तिनै अंशहरुले जीवन कति गाह्रो पारेका छन् भनेर!
"त्यतिखेर आमा दुई जिउकी हुनुहुन्थ्यो। म र आमा शहर आयौँ ! मैले अरु पैसा कमाउने मेलो पाइन ! अव यसवाट चाहेर पनि निक्लिन सक्दिन !"
धेरैवेरको मौनता चिरेर उसले सोध्यो ," अनि आमालाई थाहा छ ?"
मैले टाउको हल्लाएँ।मेरो आँखा त्यसै त्यसै रसायो। वुवालाई सम्झेँ।वुवा कराएको सम्झेँ,चिच्याएको सम्झेँ।ध्वाँसे मलाइ हेरिरह्यो।एक चोटी त मन लाग्यो म चिच्याउँ उसको अघि, आखिर के पायौ तिमीहरुले भनेर ! तर मलाई थाहा छ, उ पनि त्यहाँ एउटा अंश मात्र हो। ठूलो कथाको एउटा अंश, जसलाई पुरा कथा थाहा छैन।
"म मुख धोएर आउँछु !सरी ! मलाइ थाहा छ तँपाइ यो सुन्न आउनु भएको हैन !"
उ अझै पनि केहि वोलिरहेको थिएन। वरण्डाको अन्तिम कुनामा वाथरुम थियो। म लाइट लिएर वाहिर निस्किएँ। मुख धोएँ, फर्केर आउँदा ध्वाँसे थिएन। वाहिर निस्किएँ , वरण्डावाट तल हेरेँ। उ वाहिर निस्केर गेट लाउँदै थियो।
मेरो आत्मस्विकृती-३- ध्वाँसे
भो कति गन्थन गरौँ, जति गरे पनि कुरा उहि हो । युद्द कहिल्यै आफ्नो हुन्न।जितुन्जेल आफ्नो जस्तो लाग्छ। सँगै वस्ने त उही घाउका खाटाहरु न हुन। जित त एउटा उन्माद न हो, पानी फोका जस्तो, गर्जिउन्जेल देखिन्छ ,विलाउँछ।
हाम्रो पार्टी फुट्न आँटेको थियो। दुई खेमामा वाँडिएको स्पष्ट देखिन थालेको थियो। पत्रीकामा हल्लाहरु पनि छापिन थालेका थिए। एउटा चाहिँ सामन्तीहरुकै पार्टी अरे ,अर्को चाहिँ क्रान्तिकारीहरुको। आजकल त म छुट्याउन पनि सक्दिन।को सामन्ती को क्रान्तिकारी। आखिर उही युद्द लड्ने भए, मर्ने मान्छे कसै न कसैको आफ्नो मान्छे हुन्छन् । मैले वुझेको यत्ति नै हो, मेरो आफ्नै जीवनवाट।म त्यो सहि कारणवाट गरियो,गरिएन भन्दिन।किनकी मेरो क्षितिज नै सानो छ। मैले कति नै देखेको छु र संसार , मैले कति नै वुझेको छु र मान्छेलाई? म त सानो गाउँबाट आएको मान्छे।
वुध दाइ सत्तामा गएपछि अलि परिवर्तन भए जस्तो लाग्यो मलाई। सत्ता चल्नलाई पैसा चाहिने। म सँग पैसा थिएन। मैले आँफैले पैसाको संगत भएका थापाकाजी पनि उनकै नजिक पुर्याइदिएको थिएँ। पछि थापाकाजी सँग नै हिमचिम वढ्यो दाइको। तर त्यसलाई म नराम्रो रुपमा लिन्न। दाइले त्यहिँ आफ्नो भविष्य देख्नु भयो त्यहिँ लाग्नु भयो। के नै पो गलत हो र त्यो !
कान्छोले मुटु गाँठो पारेर आफ्नी मायालुको मा पठाएको कुरा पनि आइ नै सकेको छ माथी। फरक यति मात्र थियो की सरितालाई एउटा कुरा थाहा भएन। म उसको जस्तै घटनाको प्रमुख दोषी पात्र पनि थिएँ। किन किन सरितामा मैले त्यो दिन मास्टरको वुढी देखेँ। के उ शहरमा यसरी नै बसिरहेकी छे त ? भगवान उ राम्ररी नै वसिराखेको होस्। कुनै दिन मैले उसलाई पनि यस्तै हालतमा भेट्टाएँ भने ,कसरी माफ गरौँ आफूलाई? जीवनमा कहिलेकाहीँ आफूले गरेको गल्तिले खेदाई खेदाई पिरोल्छ।
म गाउँ जाने भएको थिएँ। मलाई किन किन सरिताकोवाट वाहिर निस्किए पछि साहिँली मगर्नीको सम्झना आयो ।मैले उसलाई फोन गरेर भनेँ
"म गाउँ आउँदैछु !"
उसले धेरै वेर मौन रहेर सोधी
"के लाई ?"
"विहे गर्न !"
"को सँग ?" उसले यसपाली सोध्न समय लगाइन।
"किन तिमी गर्दैनौ र म सँग ?"
यसपाली उ चुप लागि । धेरै वेर पछि सुस्तरी सोधी
"तैँले जाँड खाएको त छैनस् नि ?"
मैले अलि अलि त खाएको थिएँ तर ढाँटिदिएँ।
"म काठमाण्डु आउन सक्दिन तँ सँग! म गाउँ छोड्दिन !"
"कसले काठमाण्डु आइज भनेको छ र ? म पो त्यहाँ वस्छु भनेको त !"
"के गरेर वस्छस् ?"
"अष्टेले पोल्ट्री फर्म खोल्छ अरे, त्यसमै अलिकति पैसा हाल्छु ! तिम्रो पसल छँदैछ! पुग्दैन र ?"
उसले केहि भनिन । मैले हुन्छ भनेकै वुझेँ। मैले फोन राखदिएँ। कान्छोलाई डायल गरेँ अनि भनेँ
"मैले भनेको मान्छस् भने सरिता सँग विहे गर !"
उसले पनि केहि वोलेन। मलाई थाहा छ उसलाई मेरो सुझाव पचाउन समय चाहिन्छ।तर मलाई विश्वास छ अन्तिममा उसको ध्वाँसे दाइले भनेको उसले मान्नेछ।
Posted on 05-23-14 4:27 PM [Snapshot: 831] Reply [Subscribe]
फुच्चे केटो, म तिम्रो कथाहरुको नियमित पठाक हुँ तर कमेन्ट हरु तेती धेरै गर्दिन| मेरो यो सायद तेस्रो कमेन्ट हुनुपर्छ | तिम्रो कथाहरुमा एउटा छुट्टै किसिमको मिठास पाउछु म| तिम्रो लेखन सैली अरुको भन्दा भिन्न लाग्छ| यो कथा भित्र थुप्रै उप-कथाहरु बुनिएका छन् र तिम्रा प्रत्येक पात्रहरु बाट त्यस समयको नेपाली समाज र राजनीतिक परिवेशलाइ उनीहरुकै भासामा ब्यक्त गराउन सफल भएको छौ तिमी|
तिम्रो यो कथा त्यो युद्ध का दुवै तर्फका नाइकेहरु, जो पढ्न र बुझ्न सक्छन, लाइ पढ्न दिने हो भने, I wonder how they would reflect on their deed!!!
Posted on 05-23-14 8:06 PM [Snapshot: 878] Reply [Subscribe]
अष्ट धिमाल "कहिलेकाहिँ खडेरी लागेको जीवनमा पानीका थोपाहरु हराउँछन् भुइँ रसाउन नपाइ। क्रान्ती मेरो लागि त्यहि पानीको थोपा जस्तै।:
अष्ट धिमाल "मान्छे सँग जत्ति रिस उठे पनि उसलाई सिध्याइसकेपछि भने त्यो लाशको माया लाग्दो रहेछ।त्यो मेजरको लाश उठेर मलाई वुट वजार्ला जस्तो थिएन। त्यो त ढलेको थियो, निन्द्रा मा भए जस्तो ! रगतमा लतपतिएको, माया लाग्दो!!"
सरिता "मेरो आँखा त्यसै त्यसै रसायो। वुवालाई सम्झेँ।वुवा कराएको सम्झेँ,चिच्याएको सम्झेँ।ध्वाँसे मलाइ हेरिरह्यो।एक चोटी त मन लाग्यो म चिच्याउँ उसको अघि, आखिर के पायौ तिमीहरुले भनेर !"
"उसको विहामा गएर एउटा विद्रोहको इतिहाँस रच्ने योजना मैले परिवर्तन गरेँ। "
"युद्द कहिल्यै आफ्नो हुन्न।जितुन्जेल आफ्नो जस्तो लाग्छ। सँगै वस्ने त उही घाउका खाटाहरु न हुन। जित त एउटा उन्माद न हो, पानी फोका जस्तो, गर्जिउन्जेल देखिन्छ ,विलाउँछ।"
"आखिर उही युद्द लड्ने भए, मर्ने मान्छे कसै न कसैको आफ्नो मान्छे हुन्छन् ।"
"किन किन सरितामा मैले त्यो दिन मास्टरको वुढी देखेँ। ... गवान उ राम्ररी नै वसिराखेको होस्। कुनै दिन मैले उसलाई पनि यस्तै हालतमा भेट्टाएँ भने ,कसरी माफ गरौँ आफूलाई? जीवनमा कहिलेकाहीँ आफूले गरेको गल्तिले खेदाई खेदाई पिरोल्छ।"
फुच्चे, यो कथा (कथा पनि के भन्ने नेपालको एक कालखण्डको ब्यथा जसमा जोकोहि एक न एक पात्रमा आफु पाउन सक्छ) को बहाब र घटनाक्रम संगै प्रतुतीले जो कोहीलाइ बाध्न सक्छ , सोचमग्न पार्न सक्छ , पाठ पढाउन सक्छ | उपन्यासको रुपमा आएर पढ्न पाउँ !!
Posted on 05-24-14 11:33 AM [Snapshot: 943] Reply [Subscribe]
पुरै पढे , beer पनि सिध्ह्याये तिन बोत्तल , किन हो तिम्रो कथा पढ्यो कि beer तान्न मन लाग्छ, जे हॊस जनाकरन्ति को असली रुप तेही हो , जो कथा मा छ , बाकि सब त गफ हुन्
मज्जा आयो पढेर
Posted on 07-19-14 10:49 PM [Snapshot: 1528] Reply [Subscribe]
dhwase katha sidiyeko ho ra?
maile ta yeha samma matra padeko chu..yespaci ko story k ho?
Posted on 07-20-14 7:56 AM [Snapshot: 1595] Reply [Subscribe]
Timi mero sathi - thank you...
Sojoketo - sorry I dint realize that story was not copied full..sorry to all the readers...
ध्वाँसे -- Remaining..
Posted on 07-20-14 10:55 AM [Snapshot: 1657] Reply [Subscribe]
lovely, sweet!! kathako ending pani mun paryo.
i hardly readastory. Glad, I have read the superb one 'dhwase' probably,afictional character in this true story.
Sahilee magarnee character, really isasweet one for me as i do know some shahille magarnee and i am kind of dhwase for her..lol..